FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANY PIT PITSO AMERIKANA - ALIKA
American pit Bull Terrier / Cane Corso Italiano mifangaro amboa
Lato ilay alika kely Amerikanina Pit Corso amin'ny 4 1/2 volana— 'Lato dia midika hoe' fahavaratra 'amin'ny poloney. Milomano ao amin'ny dobo filomanosana izy, tia morontsiraka ary mandeha mandeha / mihazakazaka eny an-dalana. '
Ny alika Pit Corso dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny American Pit Bull Terrier ary ny Italiana Cane Corso . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Lato ilay zanak'ondry Pit Corso amerikana amin'ny 8 herinandro sy zazakely Ava
Kai the American Pit Corso puppy amin'ny 12 herinandro - 'Kai dia manana rahavavy 7 (Chloe, Gixx, ​​Lato, Lilly, Lola, Sunny ary Zen) ary ny rahalahiny roa (Junior sy Bieber). Ny reniny dia 45 kilao Lavaka orona mena ary i Dada dia 160 kilao Cane Corso antsoina hoe Kobe. Ny alikakely dia manan-tsaina, tsy mivadika ary tia ankizy, ary manao watchdog tsara koa. Ny Kai dia midika hoe ranomasina amin'ny teny Hawaii ary na dia tsy mandeha anaty rano aza izy dia mifanentana tsara amin'ny fasika amoron-dranomasina. Tiany ny milalao baolina, ny bitro feno entana ary mifoka amin'ny taolana hena. Mizara ny fiainany amin'ny fianakavian'olombelona miampy 8 izy izao saka , mankany tapaka , mankany Pug sy Zen rahavaviny. '
Lola the American Pit Corso puppy amin'ny 11 herinandro - 'Lola dia vehivavy. Tia olona sy ankizy izy. '
Sunny the American Pit Corso puppy amin'ny 8 herinandro - 'I Sunny dia tia ny mpiara-milalao aminy ary mankeny amin'ny valan-javaboary. '
Sunny ilay alika amerikana Pit Corso ao anaty fiara amin'ny 8 herinandro
Zen the American Pit Corso puppy amin'ny faha-5 volana— 'Zen aka Zendaya dia afaka mamantatra lalao alika mifampitohy ao anatin'ny segondra, mandeha amin'ny balistik tehina mpampijaly , tia taolana hena ary zavatra hafa mifandray amin'ny sakafo. Raha misy lavaka ao amin'ny fandriana biby fiompy dia ho hitany izany avy eo am-pifaliana sy am-pitoniana, avoahy ny famenoana . Sariaka be izy ary mitsambikina amin'ny rehetra ho an'ny oroka. '
Zen the American Pit Corso puppy amin'ny 15 herinandro
Zen the American Pit Corso puppy amin'ny 11 herinandro
Zen the American Pit Corso puppy amin'ny 9 herinandro
Lilly ilay alika amerikana Pit Corso amin'ny 4 1/2 volana— 'Tia i Lilly mandeha an-tongotra eny an-dalana miaraka amin'ny reniny. '
Lilly ilay alika amerikana Pit Corso amin'ny 9 herinandro
Lilly ilay alika amerikana Pit Corso amin'ny 8 herinandro
Chloe the American Pit Corso amin'ny 5 volana
Chloe ilay alika amerikana Pit Corso amin'ny 8 herinandro
haben'ny salanisan'ny poodle mahazatra
Amy sy Ava miaraka amin'i Kai sy Zen zanak'alika amerikana Pit Corso amin'ny 3 volana
Zen sy Kai zanak'alika amerikana Pit Corso ao anaty fiara amin'ny 15 herinandro
Zen, Gixx, ​​Kai ary Lola zanak'alika amerikana Pit Corso amin'ny 11 herinandro
Gixx sy Zen zanak'alika amerikana Pit Corso amin'ny 10 herinandro
Lola sy Zen zanak'alika amerikana Pit Corso amin'ny 10 herinandro
Gixx ilay zanak'ondry Pit Corso amerikana amin'ny 10 herinandro sy zazakely Ava— 'Tian'i Gixx milomano sy milalao amin'ny zokiny lahy, a Pitador antsoina hoe Jager.
Gixx ilay alika kely pit Corso amerikana amin'ny 10 herinandro sy zazakely Ava
Gixx ilay alika kely pit Corso amerikana amin'ny 10 herinandro sy zazakely Ava milaza aaah
Gixxx, Zen, Lola, Lato ary i Junior the American Pit Corso puppy amin'ny 9 herinandro
Chloe sy Kai ilay zanak'alika amerikana Pit Corso amin'ny 8 herinandro
Chloe, Kai ary Sunny ilay zanak'alika amerikana Pit Corso amin'ny 8 herinandro
Sunny, Kai, Lilly ary Chloe zanak'alika amerikana Pit Corso amin'ny 8 herinandro
Lisitry ny Cane Corso Italiano Mix Dogs
chihuahua miniature australian mpiandry mix
Jack Russell terrier Chihuahua mainty afangaro
beagle sy boston terrier mifangaro
boston terrier fifangaroana saoka japoney